फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुदैछ कारोबार ? — Sanchar Kendra
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता नेपाली बजारमा घटेको सुनको मूल्य आज बढेको छ। आज सुनको मूल्य प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज ९३ हजार ९ सय कायम भएको छ। मंगलबार १७ सयले घटेको सुन बुधबार पनि १२ सयले घटेको थियो । बिहीबार सुन १२ सयले घटेको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन तोलामा ९३ हजार ९ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै आज तेजावी सुन तोलामा ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता चाँदीको मूल्य पनि आज प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी आज प्रतितोला १ हजार १६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
यसैबीच मनोहरा तरकारी बजारको एउटै कम्पाउण्डभित्र १ किलो प्याजमा ६० रुपैयाँ मूल्य फरक भेटिएको छ। काठमाडौं महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बिहिवार गरेको अनुगमनका क्रममा सुनापति आलु प्याज सप्लायर्सले प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ बताए।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा व्यापारीबाट जफत गरेको प्याज बुधवार उपभोक्तालाई ६० रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरेको थियो। यसलाई आधार बनाउँदा किलोमा ६० रुपैयाँ बढी भेटिएको हो।
त्यही कम्पाउण्डमा रहेको सलेज आलु प्याज भण्डारले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ मात्र रहेको अनुगमन टोलीलाई जानकारी दिए। मूल्य सुन्नेबित्तिकै उपभोक्ताको भीड लाग्यो। एकैछिनमा भएभरको सबै प्याज सकियो। यो प्याज उनले ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनेका थिए तर बेचेका थिएनन्।
अरु पसलमा अनुगमन समितिले खरिद बिल मागेको देखेपछि उनले भाउ घटाएर ६० बनाएका थिए। यी दृष्य हेरिरहका एक उपभोक्ताले भने ‘हिजो बेलुका प्याज किन्न आएको, १ सय ४० रुपैयाँ किलो भनेकाले फर्केको थिएँ। आज त्यही प्याज ६० मा किन्न पाइयो।’
बजार भित्रकै जेनिसा आलु प्याज भण्डारमा प्याजको होलसेल मूल्य १ सय ५ रहेकाे सञ्चालकले बताए। युपि आलु प्याज भण्डारका सञ्चालकले खुद्रा मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ र बोरा किन्दा १ सय ५ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य सुनाए। अनुगमन समितिले तरकारी बजारका सबै होलसेल प्याज व्यापारीलाई कागजात लिएर कृषि विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ।
बजारमा अनुगमन टोली पुग्दा व्यापारीको भागाभाग भयो। छेवैमा भएका लसुन व्यापारीले आफूहरुलाई होलसेलबाट बिल प्राप्त नहुने बताए। यतिञ्जेलमा एक दुई व्यापारी पसल छोडेर भागिसकेका थिए। अनुगमन टोलीले बजार क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न आएको आक्वा व्रदर ब्राण्डका कुच्चिएका जार नष्ट गरेको छ। जारमा पानी भरिएको मिति उल्लेख थिएन। कतिपय जारबाट पानी चुहिएको थियो।
कोरोनाले काठमाडौँका खसीबोका व्यापारीमा पनि अन्यौल
हरेक वर्ष दशैँ आउनु एकमहिना अघि नै खसीबोका र भेडाच्याङ्ग्रा भित्र्याउन व्यापारीहरुमा चहलपहल सुरु हुने भए पनि यस वर्ष कति खसीबोका ल्याउने भन्नेमै अन्योल देखिएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण देश लकडाउन भएसँगै गत वर्षको चैत महिनादेखि मानिसहरु राजधानी छोड्ने क्रम जारी छ । अहिले काठमाडौँमा कति मानिस छन् र कति खसीबोका खपत हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको चौपाया खरिद बिक्री संघले जनाएको छ ।
‘लकडाउनका कारण कतिले राजधानी छोडे भन्ने यकिन छैन र दशैँमा फर्किन्छन् कि फर्किंदैनन् भन्ने पनि थाहा हुँदैन,’ संघका अध्यक्ष सञ्जय खत्रीले भने, ‘अहिले काठमाडौँमा घरधनीहरु मात्र रहेको स्थिति पनि छ ।’
विगत वर्षहरुमा असोज लाग्दै दशैँका लागि खसीबोका र भेडाच्याङ्ग्राको आयत सुरु हुने गरेको खत्रीको भनाइ छ । ‘अहिले केही दिनपछि कति ल्याउने भन्नेबारे तथ्याङ्क निकाल्छौँ’ खत्रीले भने, ‘३० देखि ३५ हजारसम्म ल्याउने कि भन्ने अनुमान छ ।’
संघकाअनुसार यसअघि हरेक वर्ष दशैँका बेला काठमाडौँका लागि मात्र करिब ५० हजार खसीबोका र ८ हजार भेडाच्याङ्ग्रा भारत, चीन र देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ ल्याइने गरेको थियो । दशैँका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसी र च्याङ्ग्रा गरेर ३ हजार वटा खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
खाद्य कम्पनीले २४ सय च्याङ्ग्रा र १६ सय खसी खरिद गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले गत वर्ष पनि ३ हजारकै संख्यामा खसीबोका र च्याङ्ग्रा खरिद गरेको थियो । कम्पनीले प्रत्येक वर्ष बजारमा खसी र च्याङ्ग्रा अभाव नहोस् भनेर आफैँले किसानबाट किनेर बजार मूल्यभन्दा केही सहुलियतमा बेच्ने गरेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
खसी र च्याङ्ग्राको खरिद संख्या तोकिए पनि यसको लागत मूल्य टुङ्गो लागेको छैन । कोभिड-१९ का कारण खसीको मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ । कोभिडकै कारण लामो बन्दाबन्दी भएपछि गाउँबाट खसीबोका ल्याउन चुनौतीसमेत थपिएको छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र दक्ष युवाहरु सामूहिक तथा व्यक्तिगतरूपमा बाख्रापालन व्यवसाय गर्न थालेका छन् । यसबाट दशैँतिहार लगायतका ठूला चाडपर्वहरुमा स्वदेशी खसीबोकाले केही हदसम्म बजार धानेको छ ।
अहिले वार्षिक १ करोड २० लाखको हाराहारी खसीबोका स्वदेशमा उत्पादन हुनथालेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार विभिन्न सहकारी संस्थामा अकाठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १ हजारदेखि १२ सयसम्म खसीबोका खपत हुने गर्छ ।